Articles Archives | Page3of4| Sancho Khabar
जीउदै चीतामाथि जलेको जीवन”
“जीउदै चित्तामाथि जलेको जीवन”
व्यस्त गल्लि अनि सडकहरु, यत्रतत्र छरपष्ट छरिएका फोहरहरु..! मन्द-मन्द हावामा बागमतीको कडा सेन्टले लाग्छ, राजधानीको परिचय दिइरहेको छ। म हत्तार- हत्तार मिटिङ्गको लागि भिड छिचोल्दै अघि बढ्दै थिए ललितपुर वडा कार्यालयको अगाडी पुग्नासाथ मेरो पाइलाहरु एका-एक अडिए। अन्दाजी ५५ बर्षो बुढो एकोहोरो ख्वाक्क- ख्वाक्क खोक्दै बिस्तारामाझै लास जलाउने चित्तामाथि पल्टिरहेको थियो। त्यो दृश्य देख्नासाथ म झस्किए। त्यहि कुपण्डोलमा डेरागरी बस्ने बिरे दाइ…! हिजोसम्म एउटा परिबारको साथ दुःख-सुःख जीवन बिताईरहेको थियो। कती मिजासिलो हुनुहुन्थ्यो। अनि कति ठूलो हृदय उनको ! कोठा नजिकै पुग्नासाथ, बाबु ! बसौन, चिया पिएर जानुस् भनेको त्यो आवाज अहिले पनि कानमै गुञ्जिरहेको छ। तर.. अचानक् बिरे दाई यहाँ ! म अल्मल्लमा परे।
के भो दाई सञ्चो छैन? Read More…
मुटु रोगबाट बच्ने तरिका
मुटु रोगलाई सुषुप्त हत्यारा भन्न थालिएको छ। मुटु र रक्तनलीसम्बन्धी रोग गम्भीर प्रकारका हुन्छन्। त्यसबाट मानिसको तत्काल मृत्युसमेत हुन सक्छ। उपचार खर्चिलो र जटिल छ। तर, रोगबाट बच्ने उपाय भने अपेक्षाकृत सस्तो, सजिलो र सुलभ छन्। यस वर्षको विश्व मुटु दिवसका नारा र प्रचार सामग्री विशेष गरी महिला र केटाकेटीप्रति लक्षित छन्। मुटुरोगबाट बच्ने उपाय घरबाटै सुरु गर्नुपर्ने र घरका महिला यसमा सजग भएमा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई नै रोगबाट बचाउन सकिने हुनाले विश्व मुटु महासंघले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो। महासंघको अगुवाइमा हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २९ का दिन मुटुरोग र यसबाट बच्ने उपाय सम्बन्धमा जनचेतना जगाउन विश्व मुटु दिवस मनाइन्छ। मुटु र रक्तनलीसम्बन्धी रोग विभिन्न प्रकारका छन्। जस्तै : कोरोनरी मुटुरोग र हृदयाघात, मुटुको बाथरोग, जन्मजात हुने मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्कघात आदि। कोरोनरी मुटुरोग र हृदयाघात आजका जल्दाबल्दा समस्या हुन्। रोगको पहिचान र उपचार पद्धतिमा भएको ठूलो प्रगतिका बाबजुद अझै पनि एकतिहाइभन्दा बढी मानिसको पहिलो हृदयाघातमा नै मृत्यु हुन्छ। केही दशकअगाडिसम्म बुढ्यौली र धनी मानिसको रोग भनेर चिनिए पनि अचेल युवा उमेरका, मध्यम र निम्न आर्थिक अवस्था भएका मानिसमा समेत यो रोग देखिन थालेको छ।
कम्प्यूटरमा राखिएका डकुमेन्टसलाइ सही तरिकाले राख्ने कामलाई नै व्याकअप भनिन्छ। कम्प्यूटरमा राखिएका डकुमेन्टसको ‘लोकेसन’ बिर्सिएर खोज्न गाह्रो हुने र कहिले कम्प्यूटरले राम्रोसँग काम नगर्नु, कहिलेकाही अचानक बत्ती गए वा कुनै कारणले कम्प्युटर बन्द भए, फेरि खोल्दा त्यो हराइसकेको वा बिग्रिएको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा डाटा सुरक्षित राख्न व्याकअपको आवश्यकता पर्दछ। इन्टरनेट जोडिएको कम्प्युटरमा यो जोखिम झन् बढी हुन्छ। जस्तोसुकै एन्टिभाइरस राखे पनि ह्याकरले नयाँनयाँ ढंगले कम्प्युटर विवरणलाई क्षति पुर्‍याइरहेका हुन्छन्। कम्प्युटरै फर्म्याट गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। यस्तोबेला आफ्ना महत्वपूर्ण विवरण ‘ब्याक अप’मा राखिएको छैन भने ती सधैंका लागि नपाइने हुन्छ।